Iidemon kunye neeRejista zokuRekhoda Ngaba iiHallsmarks zale Nkomfa
"Umsebenzi weParanormal" iimpawu zokufumana i-franchise "zifunyenwe imifanekiso" yeziganeko eziyinyani ezenzeke kwiintombi zaseCalifornia ezixhatshazwa ngamandla amademoni.
Abaphangi baya phambili!
'Umsebenzi weParanormal' (2009)
Imifanekiso yekhamera yeVidiyo ukususela ngowe-2006 ibonisa isibini esitshatileyo-uKathy kunye nesoka lakhe, uMika - ukuhlala kwikhaya labo elitsha laseSan Diego. UCathy ucinga ukuba uhanjiswe ebusaneni ngumoya, kwaye nangona uMika engaqiniseki, ubeka iikhamera ngendlu ukuze athathe naluphi na ubungqina bendalo. Emva kokuphazamisa nokujika, uMika uphela wafa waza uKatiza uphela ulahlekile.
'Umsebenzi weParanormal 2' (2010)
Ngo-2006, uKristi (udadewabo kaKathy ovela kwibhayisikobho yokuqala) kunye nomyeni wakhe, uDan, babuyela eKarlsbad, eCalifornia, ekhaya ngelinye ilanga ukuze bafumane i-prequel kwi-movie yokuqala kwi-franchise. UDan ufaka iikhamera zokhuseleko kulo lonke indlu, kwaye iikhamera zevidiyo zithatha uluhlu lwamanyathelo angaqhelekanga kunye nemisindo ebonakala ngathi ixhomekeke kumntwana uHunter. Eli phephancwadi libuye linikeze kwiziko leedemon elidibene neK Katie. Abalinganiswa abaninzi bavuthwa bafile ngokuphela kwalowo, kunye noK Katie baphinde balahleka, ngeli xesha kunye noHunter kunye naye.
'Umsebenzi weParanormal 3' (2011)
Le prequel iqala ngowama-2005 kunye noKatie ehambisa ibhokisi yee-videotapes endlwini kaKristi ukuze igcinwe (eyaziwayo ngokubanjwe ngonyaka emva kokusuka kwi-"Paranormal Activity 2"). Ngaphakathi ziividiyo zasekhaya ukusuka ngoSeptemba 1988 ezityhila ubunzima oodade abafumana njengamantombazana abangazikhumbuli ngokupheleleyo njengabantu abadala. Eli phephancwadi libeka amabali axelelwe kwiifilimu zokuqala ezimbini ze-franchise. Ukufa kubanzi apha, naye.
'Umsebenzi weParanormal 4' (2012)
Kwiminyaka emihlanu emva kweziganeko ezikuMsebenzi weParanormal kunye no-"Umsebenzi weParanormal 2," uKaren noHunter ahlala khona. Kodwa bahlala kwindawo yokuhlala emadolobheni eHenderson, eNevada, apho umama ongatshatanga (uK Katie) kunye nendodana yakhe encinci ehamba kwindlu esecaleni kwesitalato evela ku-Alex oneminyaka engu-15 kunye nentsapho yakhe. Ukufa okugqithisileyo kugqityiwe kwaye ababukeli bafumanisa oko kwenzeka kuHunter.
'Umsebenzi weParanormal 5' (2014)
Le filimu iqhutyelwa e-Oxnard, eCalifornia, ngowama-2012, apho iqela labafundi base-Latino basesikolweni esiphakamileyo besengozini yecawa kunye neidemon zalo. Le fayili ilandela iphethane efanayo neyokudlulileyo kwi-franchise, kunye neefowuni zokurekhoda zidlala indima kwintsebenzo kunye neendidi ezahlukahlukeneyo ezibandakanya iidemon eziphazamisa bonke abachaphazelekayo.
'Umsebenzi weParanormal 6' (2015)
I-movie yakutshanje kwi-"Paranormal" i-franchise ilandela intsapho entsha ehamba endlwini yaseSanta Rosa, eCalifornia, ngowama-2013 kwaye apho bayifumana ibhokisi yee-tapotapes ezibandakanya ukudemonzwa kukaKatien noKristi njengabantwana, abo baxelelwa ngamabali Iifilimu zangaphambili. Unentombi, uLeila, owazalwa ngosuku olufanayo njengoHunter kwimiboniso yefilimu yangaphambili, kwaye kubonakala ukuba idemon elidala libuyele, ngeli xesha lijolise kule ntombazana. Njengamafilimu adlulileyo, iifayili zevidiyo zidlala indima ekurekhodeni imicimbi yeziganeko njengoko zivela.
Ukuhlaziywa kwe-Movie Horror 'Inkedama'
Amaphepha Eemali - Ukubala Ukuguquka